Izindaba - Ukuhlaziywa kwebhethri le-lithium kanye nomkhakha wezimoto ezintsha zamandla
Ngokwesimo sokuthuthuka okuthuthukayo kwezimoto ezintsha zamandla, izimoto zikagesi eziyizigidi eziyi-2.2 zathengiswa umhlaba wonke ngo-2019, ukwanda okungu-14.5% ngonyaka, okubalwa ngo-2.5% wokuthengiswa kwezimoto okuphelele. Okwamanje, ngokuthengiswa kwezimoto ezintsha zamandla, i-BYD ikleliswe endaweni yesibili nguTesla. Eminyakeni eyi-19, uTesla wathengisa izimoto zikagesi ezingama-367820, zikleliswa kuqala emhlabeni, zibala u-16.6% wenani lomhlaba jikelele.
I-China ingumkhiqizi nomthengisi omkhulu kunabo bonke wezimoto zamandla ezintsha. Ngo-2019, iChina yanciphisa uxhaso lwezimoto ezintsha zamandla. Umthamo wokuthengisa wezimoto ezintsha zamandla wawuyizigidi eziyi-1.206, wehla ngo-4% unyaka nonyaka, obala u-4.68% wengqikithi yomhlaba. Phakathi kwazo, kunezimoto ezisebenza ngogesi ezingama-972000 kanye nezimoto ezingama-232000 ze-plug-in hybrid.
Ukuthuthuka okunamandla kwezimoto zamandla ezintsha zomhlaba kukhuthaze ukuthuthukiswa komkhakha webhethri we-lithium-ion. Inani lokuthunyelwa kwebhethri le-lithium-ion lenyuke ngo-16.6% uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, laya ku-116.6gwh ngo-2019.
Ngo-2019, kwafakwa ama-lithium amabhethri angama-62.28gwh eChina, anyuka ngo-9.3% ngonyaka. Ngokucabanga ukuthi ukukhishwa kwezimoto ezintsha zamandla kuzoba yi-5.9 million ngo-2025, isidingo samabhethri kagesi sizofinyelela ku-330.6gwh, bese kuthi iCAGR inyuke ngo-32.1% isuke ku-62.28gwh ngo-2019.
12v Lithium Ion Ibhethri elishajekayo, Iphakethe Lithium Battery Pack eyi-12 Volt, Li Ibhethri, 18650 uNimh, I-Lithium Ion Polymer Ibhethri, 3.7 Ibhethri elishajekayo, Yonke Imikhiqizo